ရောင်းရန်၏သတ်မှတ်ချက်များကို -, Ltd. Foshan Xinxingye Glass ကို Co. ,
- ဆောင်မှုများ & စွမ်းဆောင်ရည်
1. ပူဇော်သက္ကာနှင့်လက်ခံပါ။ ဖောက်သည်ဖို့အာရုံစိုက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Glass ကို ( "FSG") အားဖြင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးရောင်းအားအဖြစ်မဟုတ်ရင်ဖော်ပြ FSG ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းအတွက်သဘောတူညီခဲ့ မှလွဲ. ရောင်းရန်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းအခြားသောစာရွက်စာတမ်းများ FSG ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းအတွက်သဘောတူညီခဲ့အတူတကွနှင့်တကွ, ပါတီများနှင့်အခြားအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေတစ်ခုလုံးသဘောတူညီချက်ဖော်ပြပယ်ချနေကြသည်ဖော်ပြ။ ဤစာရွက်စာတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် FSG ရောင်းအားသဘောတူညီချက်, စျေးနှုန်းစာရင်း, ငွေတောင်းခံလွှာများသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းသို့ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းသည်ဆိုပါက, က FSG နှင့်ဖောက်သည်များ၏တစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ပါဝင်သည်။ FSG အားဖြင့်တင်ပို့ထုတ်ကုန်များ၏ဖောက်သည်ရဲ့လက်ခံမှုဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏အပေါင်းတို့၏ဖောက်သည်များကလက်ခံမှုဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားသဘောတူညီချက်, ကြေညာချက်သို့မဟုတ်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော FSG ဖွငျ့သို့မဟုတ်အရေးအသားထဲမှာမကြောင်းဖောက်သည်မှ FSG အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုနှင့်စပ်လျဉ်းဖောက်သည်များကအဆိုပြုထားနှင့် FSG ကလက်မှတ်ရေးထိုး FSG အပေါ် binding ဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာရွက်စာတမ်းတစ်ဦးဝယ်ယူနိုင်ရန်သို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းသို့ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းဒါမှမဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လျှင်, ဤစာရွက်စာတမ်းဖောက်သည်များကလုပ်ဆိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုငြင်းပယ်ခံရသည်နှင့်ဖောက်သည်ဖို့စျေးနှုန်းမှာဖော်ထုတ်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ FSG ခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (s), ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ညွှန်ပြ။ ဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်ယူအလို့ငှာဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤဖော်ပြထားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်ယူအလို့ငှာမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။ FSG ရဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖော်ပြဤစာရွက်စာတမ်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းတွင်ဖော်ပြထားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဖောက်သည်ရဲ့အစွမ်းအပေါ်အေးစက်နေသည် FSG FSG ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းအတွက်ဆန့်ကျင်ရန်သဘောတူမဟုတ်လျှင်ပေးထားယူဆလိမ့်မည်။ တစ်ဦး FSG အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များ၏ဖောက်သည်သို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းမှမဆိုဆက်သွယ်ရေးတွင်ပါရှိသောမည်သည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုကန့်ကွက်ရန် FSG ၏အဘယ်သူမျှမပျက်ကွက်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ဤစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနတစ်ခုလက်ခံမှုတွင်ဖော်ပြထားအခြေအနေများတစ်ဦးစွန့်လွှတ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ပါလိမ့်မယ်။
2. စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ။ မဆို FSG quotation ရောင်းအားသည်ဤ FSG သတ်မှတ်ချက်များဝယ်သူရဲ့လက်ခံမှုအပေါ်အေးစက်နေသည်။ ဝယ်သူမဟုတ်ရင်အရေးအသားအတွက်ထွက်မသတ်မှတ်ဘဲနေလျှင်, ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲအရောင်းဤသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နှင့် FSG အားဖြင့်စာဖြင့်ရေးသားလက်ခံမည်။ ဝယ်သူရဲ့ဝယ်ယူမှုအမိန့်သို့မဟုတ်မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း, ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဆိုအခြားအရင်းအမြစ်ကနေမဆိုအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေများ, ဖယ်ထုတ်လိုက်ယူဆနေကြသည်။ ရောင်းအားဤဝေါဟာရများကိုအခြားစာရွက်စာတမ်းများတွင်မဆိုပဋိပက္ခဖြစ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုကျော်စားပေးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ယူရလိမ့်မည်။ တစ်ခုက "အမိန့်" သို့မဟုတ် "အရစ်ကျအမိန့်" ဝယ်သူရဲ့ဝယ်ယူမှုအမိန့်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသား FSG ကလက်ခံအခြားမည်သည့်အမိန့်သို့မဟုတ်စာချုပ်ပုံစံကိုဆိုလိုသည်။
3. ကုန်စည်ပရိဘောဂ။ FSG စီမံကိန်းအတွက်အစီအစဉ်များ, သတ်မှတ်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဝယ်သူရဲ့ဝယ်ယူမှုအမိန့် (s) မှကွဲပြားစေခြင်းငှါအရာသာအရေအတွက်နှင့်အမျိုးအစား FSG အမိန့်အတည်ပြုချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကုန်စည်, Pro ကို forma သို့မဟုတ်ကောက်နုတ်ချက်, ပြင်ဆင်ရန်သဘောတူ။ FSG အရေးအသားအတွက်သဘောတူလျက်, လိုအပ်ပါကတစ်ဦးသာတူညီမျှညှိနှိုင်းမှုစျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ဝေဝေါဟာရများမှဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်လျှင် FSG Pro ကို forma သို့မဟုတ်ကိုးကားခြင်း, FSG အမိန့်အတည်ပြုချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများမှမဆိုပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်စေတာဝန်ရှိသည်ဟုမရကြလိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင် FSG အားဖြင့်အရေးအသားအတွက်သဘောတူညီခဲ့မဟုတ်လျှင်တစ်ခုအတိအကျသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင်တစ်ခုအမိန့်အောက်တွင် FSG အားဖြင့်ထောက်ပံ့အားလုံးကုန်ပစ္စည်းများ, သည်းခံစိတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှု၏အသုံးပြုမှုပုံမှန် FSG ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျတဲ့စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းများကိုနှင့်ကိုက်ညီမူကွဲမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောသည်းခံစိတ်နဲ့မူကွဲကိုမဆိုသီးခြား FSG အာမခံဖန်တီးရမည်မဟုတ်။
4. စျေးနှုန်း။ FSG ကသူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းများအရသိရသည် "ကုမ္ပဏီတခု" ဖွဖော်ပြထားကြသည်စေသည်တိကျမ်းစာ၌လာသည်စျေးနှုန်းကိုးကားအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ပါလိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင် FSG ကလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်သက်ဆိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းကိုတွင်ဖော်ပြထားလျှင် FSG ရဲ့ထုတ်ဝေစျေးနှုန်းများနှင့်အထူးလျှော့စျေးအပေါငျးတို့သရှိလျှင်, FSG အားဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက် FSG က၎င်း၏စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲ, သေးတင်ပို့မဟုတ်ဤစာရွက်စာတမ်းအောက်မှာထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်း FSG FSG ပေးအပ်ထုတ်ကုန်အလို့ငှာ, FSG ထုတ်လုပ်နှောင့်နှေးရန်သဘောတူလျှင် မှလွဲ. အရေးအသားအတွက်အလို့ငှာလက်ခံရရှိခဲ့ရက်စွဲအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်စျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည် ညွှန်ကြားချက်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်ပေးပို့ဖြည့်စွက်ဖို့ဖောက်သည်ထံမှလက်ခံရရှိသည့်အခါထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်ပြီးတော့ဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာမဆိုထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေ, FSG ရဲ့ option ကိုမှာထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသူတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အမိန့်ကိုလက်ခံပြီးသောအခါတစ်ထူးချွန်အလို့ငှာမဆိုဖြည့်စွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာစျေးနှုန်းများမှာကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ အားလုံးစျေးနှုန်းများ FSG သက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းရန်သဘောတူရက်စွဲအပေါ်အလုပ်သမား, ပစ္စည်းများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သက်ဆိုင်အခွန်အခများနှင့်ထုံးစံတာဝန်များကို၏နှုန်းထားများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအခြားကုန်ကျစရိတ်များကုန်ကျအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ FSG ပေးဆောင်ရမည့်စျေးနှုန်းများထိန်းညှိဖို့, အင်အားသုံး majeure သို့မဟုတ် presupposed အခြေအနေများတစ်ဦးပျက်ကွက်၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခုထဲကပေါ်ထွက်လာသောဖြစ်စေမ, ထိုကဲ့သို့သောနေ့စွဲသို့မဟုတ်စျေးကွက်စျေးနှုန်းများအတွက်ထူးခြားသောတိုးပြီးနောက်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်တွင်မဆိုမည်သည့်ပစ္စည်းကိုတိုး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဖောက်သည်မှအသိပေးစာအပေါ်သို့။
5. အမိန့်ကျင်းပ; ဖျက်သိမ်းခြင်း။ ဝယ်သူရဲ့အမိန့် FSG ကလက်ခံထားပြီးပြီးနောက်အမိန့် FSG ရဲ့ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ, ကိုင်ပေါ်တွင်တင်ပြုပြင်မွမ်းမံ, ဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မရနိုင်ပါ။ ဝယ်သူထက်ပိုမိုသုံးဆယ် (30) ရက်ကြာကိုင်ပေါ်မဆိုအမိန့်နေရာသောဖြစ်ရပ်အတွက်, ဝယ်သူအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ကို၎င်း, ကိုင်၏ရလဒ်အဖြစ် FSG မြှုတ်အားလုံးပစ္စည်း, အလုပ်သမားများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် FSG ငွေကြေးပေးအပ်မည်။ ဝယ်သူမဆိုအမိန့်ဖျက်သိမ်းပါက, ဝယ်သူကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အမိန့်ပြောင်းလဲမှုစွဲချက်အဘို့အ FSG မှငွေပေးချေမှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အမိန့်ပြောင်းလဲမှုစွဲချက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, ဝယ်သူ, FSG ၏အပိုင်ထဲမှာအားလုံးချောကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းများအတွက်စာချုပ်စျေးမှ FSG အားဖြင့်တင်ပို့အားလုံးကုန်စည်များအတွက်စာချုပ်စျေးဟာမှ FSG မြှုတ်ရှိသမျှသည်အခြားသောတိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ် ရောင်းအားသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များပုဒ်မ 8 မှာဖျောပွထားသညျ့အဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လျှော့ချရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်သိုလှောင်မှုစွဲချက်ကို အသုံးပြု. လျော့ပါးခံရဖို့မတတျနိုငျအတိုင်းအတာ။ ယင်းအချိန်တွင်ဝယ်သူအတွက်အမိန့် FSG က၎င်း၏ဆိုင်ကြမ်းပြင်မဆိုအပေါ်အမိန့်မှလေးစားမှုနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလုပ်ရှိပါတယ်ဖျက်သိမ်းလျှင်အပြင်, FSG အခြိနျမှာဆိုင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသောကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုအပြီးသတ်ခွင့်ပြုရကြလိမ့်မည် အမိန့်ထိုကဲ့သို့သောကုန်စည်များအတွက်ဝယ်သူအတွက်စာချုပ်ဈေးနှုန်းချောကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများနေရာဖျက်သိမ်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။
6. အခြားကုန်ကျစရိတ်များ။ မဟုတ်ရင် FSG အားဖြင့်အရေးအသားအတွက်သဘောတူညီခဲ့မဟုတ်လျှင်ဝယ်, အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စာချုပ်စျေးထုတ်လုပ်သူရဲ့စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများအခွန်ငွေ, အရောင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုအခွန်, သို့မဟုတ်အခြားပြည်နယ်ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားရေးအခွန်အခများနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေလွှဲပြောင်းမှုအပေါ်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါအကဲဖြတ်မပါဝင်ပါဘူးသဘောတူ ။ ဒေသခံအလုပ်သမားသဘောတူညီချက်များမှပေါ်ပေါက်အားလုံးအပိုဆောင်းဖြန့်ဝေကုန်ကျစရိတ်ဝယ်သူ၏တာဝန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဝယ်သူနောက်ထပ်အားလုံးစတုရန်းပေစျေးနှုန်းကတော့ FSG quotation အတွက်ထွက် set ပျေါအခွခေံသို့ပို့ကြောင်းသဘောတူ။ FSG ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်အမည်မသိဝန်ပိုနှင့် quotation နေ့စွဲပြီးနောက်၎င်း၏ရောင်းချသူအားဖြင့် FSG ဆန့်ကျင်အကဲဖြတ်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဝယ်သူငွေတောင်းပြေစာပို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
7. Delivery လက်ခံ။ အဆိုပါ FOB အမှတ်မှာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှ FSG အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေဖုန်းဆက်ဖို့ပေးပို့ဖွဲ့စည်းတော်မူမည် နှင့်ဘာမှမဆန့်ကျင်ရန်နှင့်မသက်ဆိုင် FSG အဆိုပါကုန်တင်ချေရှိမရှိသို့မဟုတ်မ၏သျောလညျးအကူးအပြောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးအန္တရာယ်ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှပေးပို့အပေါ်သို့ဖောက်သည်ဖို့လွန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်စီစဉ်ထားရေကြောင်းနေ့စွဲကျော်လွန်ဖောက်သည်များ၏အဆင်ပြေဘို့မေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ် လုပ်. မဆိုနှောင့်နှေးမဆိုသိုလှောင်စရိတ်, demurrage အခကြေးငွေ, Truck နှင့်အခြားအားဖြင့်တကားကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များအတွက်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်။ FSG အားဖြင့်ထောက်ပံ့ကုန်ပစ္စည်း (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကျိုး, ဒါကိုတော့, ခြစ်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားပစ္စည်းပါဝင်မှုများနှင့်အခြား nonconformity သို့မဟုတ် noncompliance) nonconformity များအတွက်ဖောက်သည်, ရှားပါးမှုနှင့်အခြားအမှားများအားဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ရမည်ဖြစ်သည်, လူအပေါင်းတို့တောင်းဆိုမှုများအတွက်အတွင်း FSG အားဖြင့်အရေးအသားအတွက်လက်ခံရရှိ မူလတင်ပို့ destination သည်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များ၏နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမှာတင်ပို့လက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်ဆယ် (10) ရက်အတွင်း၏အစောပိုင်း။ ထိုကဲ့သို့သောကာလအတွင်းတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုလုပ်ပျက်ကွက်ဖောက်သည်များကအားလုံးထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများတစ်ဦးစွန့်လွှတ်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်, ဒီလိုပျက်ကွက်သည့်ထုတ်ကုန်များ၏လက်ခံမှုဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ FSG စွပ်စွဲချက်ချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ် nonconforming ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်, FSG ရဲ့ option ကိုမှာ FSG ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်, ပြုပြင်အဖြစ်, FSG မှဖောက်သည်များကပေးဆောင်စျေးနှုန်းကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခွင့်အလမ်းပေးသောရမည်ဖြစ်သည်။ FSG နေဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံလျှင်, ချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ် nonconforming ထုတ်ကုန် FSG မှပြန်လာသောရမည်ဖြစ်သည်။
8. သိုလှောင်စွပ်စွဲချက်။ ဝယ်သူအတွက် FSG အမိန့်အတည်ပြုချက်အပေါ်ဖော်ပြထားပေးပို့သည့်နေ့စွဲဖြင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကိုလက်ခံရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းမဆိုပြီးစီးမိန့်တစ်လလျှင်သေတ္တာနှုန်း $ 150,00 တစ်မှုနှုန်းမှာသိုလှောင်မှုစွဲချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားသိုလှောင်မှုစွဲချက်ဝယ်သူအသားတင်ရက်ပေါင်း 30 တို့ကပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာ FSG ဒီပုဒ်မအညီသိမ်းဆည်းထားကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများမှမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်, အဖိုးအခ, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ရလိမ့်မည်။ FSG အထူးအဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှု disclaims, ဒါမှမဟုတ်ချောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ၏သိုလှောင်မှုမှရရှိလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက် FSG ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်တိကျတဲ့သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များတစုံတမျိုးဆန့်ကျင်အတွက် hereunder သိမ်းဆည်းထား။
9. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။ မည်သည့်အမိန့်များအတွက်ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို retainage သို့မဟုတ်ခွင့်ပြု set-ပယ်ခြင်းမရှိအတူ, ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာအပေါ်သတ်မှတ်ထားသောခံရကြလိမ့်မည်။ ဝယ်မယ့်ငွေပေးချေမှုတာဝန်ဝတ္တရားဆိုတတိယပါတီထံမှငွေပေးချေ၏ဝယ်မယ့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်အေးစက်ခြင်းကိုမခံရ။ ဝယ်သူဝယ်သူရဲ့ default သို့မဟုတ် Non-ငွေပေးချေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေရဲ့အဖိုးအခ, ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမစုဆောင်း FSG ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ FSG ကြိုတင်တင်ပို့ရောင်းချမှုများအတွက်အချိန်မီငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးမမူလျှင်အနာဂတ်တင်ပို့ရောင်းချမှုနှိမ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
10. ခရက်ဒစ်သတ်မှတ်ချက်များကို။ FSG ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိဝယ်သူမှချေးငွေစည်းကမ်းချက်များကိုပေးရန်သဘောတူလိမ့်မည်။ FSG ဝယ်သူမှချေးငွေပေးရန်ငြင်းဆန်ရန်၎င်း၏ option ကိုတငျပွခဲ့လျှင်, FSG မဆိုပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်သမျှဝယ်သူမှကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြမည်။ မဆိုအကြွေးအသုံးအနှုန်းများဝယ်သူရဲ့အကြွေး၏ FSG ရဲ့ဆက်လက်ခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ , FSG ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိနှင့်ပြဌာန်းခွင့်အတွက်, ဝယ်သူရဲ့အကြွေးသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးရပ်တည်မှုမကျေနပ်ကြဖြစ်လာပါက, FSG က၎င်း၏အကြွေးအသုံးအနှုန်းများရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်။
11. စစ်ဆေးရေး။ ဝယ်သူလက်ခံရရှိပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုပြီးနောက်တစ်ဆယ် (10) ရက်အတွင်း nonconforming ဖြစ်ကြောင်းဆိုအရေးဆိုမှု၏အရေးအသားအတွက် FSG အကြောင်းကြားရလိမ့်မည်။ FSG ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုသဖြင့်, ကုန်ပစ္စည်းများမှကျိုးကြောင်းဆီလျော် access ကိုဝယ်သူရဲ့ဝုဏ်အပေါ်တစ်ဦးသိုလှောင်မှုစက်ရုံမှာဒါမှမဟုတ်အလုပ် site ပေါ်တွင်ရှိမရှိအပါအဝင်စွပ်စွဲချက် Non-ကိုက်ညီမဆိုပြောဆိုချက်ကို, ကုသခံရကြလိမ့်မည်။ ဝယ်သူရဲ့ FSG လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စက်ရုံဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလေ့အကျင့်နဲ့လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်နှင့်လိုက်နာမှုလက်မှတ်ထိုးရန်ဘာသာရပ်, ဝယ်သူ FSG ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများမှာကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းမှစီစဉ်ပေမည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးရေး FSG ရဲ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိရ။ မည်သည့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်စည်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးရေးထဲကပေါ်ထွက်လာသော Non-ကိုက်ညီချောကုန်စည်ဝယ်မယ့်ငြင်းပယ်ခံရကြိုတင်ထိုကဲ့သို့သောကုန်စည်တင်ပို့ဖို့ FSG မှရေးသားခြင်းအတွက်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကုန်ပစ္စည်းများ FSG ရဲ့ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲအကြွေးများအတွက် FSG မှပြန်လာသောနိုင်ပါသည်။
12. လီမိတက်အာမခံ။ FSG အနေနဲ့အမိန့်အညီတင်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများများအတွက်ကန့်သတ်အာမခံပေးသည်။ FSG ရဲ့အာမခံအသုံးအနှုန်းများတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိနိုင်မယ့်သီးခြားအာမခံလက်မှတ်အတွက်ထွက်မသတ်မှတ်နေကြသည်။ FSG ရဲ့အာမခံအပြည့်အဝပေးချေမှုရောင်းချမှု၏အပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအဘို့အပေးခံသောဖြစ်ရပ်၌အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ FSG ရဲ့ကန့်သတ်အာမခံ, ဝယ်သူမှပေးအဖြစ်သာ FSG သမ္မတသို့မဟုတ်ဒုတိယသမ္မတ (s) စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်အပျေါ၌ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ မဆိုတည်ဆဲ FSG ကန့်သတ်အာမခံပြုပြင်မွမ်းမံရန်ရည်ရွယ်မဆိုနှုတ်ကိုယ်စားပြု FSG ဆန့်ကျင်မမှန်ကန်တဲ့နှင့်မပြုနိုင်ကြလိမ့်မည်။ တိုးချဲ့အာမခံထားတဲ့အပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်နှင့် FSG ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် FSG ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအသေးစိတ်ကို glazing ၏စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်များမှာပေမည်။
13. အကြောင်းသတိပြုစရာများ။ FSG ဖော်ပြမဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဖော်ပြအာမခံ၏၎င်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များထွက်မသတ်မှတ်သည့်အခြားတာဝန် OR liabilities FOR ကုန်သည် OR ကြံ့ခိုင်ရေး၏မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံ DISCLAIMS ။ FSG မဆိုမျိုးသွယ်ဝိုက်စကားမစပ်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, အထူး OR ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်အခြေအနေတွင်ခံထိုက်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဝယ်မယ့်အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား FSG အားဖြင့်ထောက်ပံ့မဆိုကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. နှင့်ချွတ်ယွင်းဖြစ်သက်သေပြ, ဝယ်သူမှပေး FSG ရဲ့လီမိတက်အာမခံအတွက်ထွက်သတ်မှတ်ထားသူတွေကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ FSG အနေနဲ့အမိန့်အောက်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အစားထိုးကုန်စည်များအတွက် FSG ရောင်းချမဆိုကုန်စည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, ဖယ်ရှားရေး, စစ်ဆေးခြင်း, စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်မှုအတွက်မဆိုအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဆိုတာဝန်ခံသို့မဟုတ်စရိတ်ဝယ်သူကတင်ပြသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
14. S ကို UITAB ILITY ။ ဖောက်သည်ဖောက်သည်ရဲ့နည်းစနစ်များ, လုပ်ငန်းစဉ်များ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့် applications များများအတွက်ထုတ်ကုန်များသင့်လျော်အတူအသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၏သင့်လျော်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်မှုဆုံးဖြတ်ဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။ Annealed ဖန်အချို့အဆောက်အဦး codes တွေကိုနှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများတွင် "အန္တရာယ်ရှိသော" အဖြစ်ဖော်ထုတ်နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်ဘူး။ ဖောက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောနေရာဘေးကင်းလုံခြုံမှု glaze ပစ္စည်းများ (ဥပမာစနစ်ဖြစ်ပြီးဖန်သို့မဟုတ်လမိုင်းဖန်) သုံးစွဲဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအဆိုပြုထားအတွက် FSG may အခြိနျမှနျမှကမ်းလှမ်းမှုကိုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့နည်းစနစ်များ, လုပ်ငန်းစဉ်များ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်နှင့်အတူအသုံးပြုရရန်, FSG အားဖြင့်ထောက်ပံ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ယင်း၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေး, စမ်းသပ်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တောင်းခံရ, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များသင့်လျော်သော လျှောက်လွှာမ FSG ရမညျလေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်တာဝန်, တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ခံယူရကြမည်ဟုသို့မဟုတ်တူညီသောဖြည့်စွက်ရန်။ ဖောက်သည်ခပ်သိမ်းသောကာလကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, ဖောက်သည်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကို, ထင်မြင်ယူဆ, လုပ်ငန်းစဉ်များ, ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၏သင့်လျော်သောအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အပေါင်းတို့နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုဖော်ထုတ်နှင့်ဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမှဖျော်ဖြေတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်, ခန့်မှန်းချက်နှင့်ဖောက်သည်၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအာမခံရန်လိုအပ်သောသည်အခြားစမ်းသပ်မှုများနှင့်စာမေးပွဲအဆုံးသုံးအခြေအနေများအောက်တွင်အသုံးပြုမှုများအတွက်, လုံခြုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်သင့်လျော်ကြလိမ့်မည်။
15. သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း Scheduler; Force MAJEURE ။ အားလုံးကိုးကားရေကြောင်းအချိန်ဇယားအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးဖောက်သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွခရက်ဒစ်အချက်အလက်များ၏ FSG အားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲခွင့်ပြုချက်ထံမှ FSG အားဖြင့် prompt ကိုလက်ခံရရှိအပေါ်သို့မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်ဖော်ပြသဘောတူညီခဲ့မဟုတ်လျှင် FSG, စာရေးသို့မဟုတ်အရစ်ကျပေးပို့စေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ထိုကဲ့သို့သောစာရေးသို့မဟုတ်အရစ်ကျသောအခါအမှုကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီငွေတောင်းခံလွှာအောက်မှာနှင့်နောက်ဆက်တွဲပေးပို့ ပတ်သက်. မရှိဘဲပေးဆောင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ပေးသောသီးခြားငွေတောင်းခံလွှာများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ FSG အထူး FSG ၏အရာရှိတစ်ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးနေတဲ့အရေးအသားထိုသို့သောပြစ်ဒဏ်ဖို့သဘောတူထားပါတယ်မဟုတ်လျှင်အဘယ်သူမျှမ FSG ရေကြောင်းအချိန်ဇယားတွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်အဘို့အထိုက်ကြလိမ့်မည်။ FSGs သညျဘုရားသခငျ၏အက်ဥပဒေ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်ပေးပို့သို့မဟုတ်ကြောင့် FSG ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိန်းချုပ်မှု ကျော်လွန်. မဆိုအကြောင်းမရှိမှကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပျက်ကွက်အတွက်မဆိုနှောင့်နှေး, ၏ရလဒ်အဖြစ်စေသောမည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဖောက်သည်မဆိုလုပ်ရပ်; ပိတ်ဆို့မှုများသို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောလုပ်ရပ်, စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းတောင်းဆိုမှုကို; မီး; မတော်တဆထိခိုက်မှု; သပိတ်; အရှိန်လျော့သည်; စစ်; အဓိကရုဏ်း; ရေလွှမ်းမိုး; သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နှောင့်နှေး; သို့မဟုတ်ဓလေ့ထုံးတမ်းစျေးနှုန်းများ ( "တပ်ဖွဲ့ Majeure ပွဲများ") မှာလိုအပ်သောလုပ်အား, ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်စက်ရုံများရရှိရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ မည်သည့်တပ်မှ Majeure ပွဲ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ FSG အဆိုပါအင်အားစု Majeure ပွဲ၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏အခါထုတ်ကုန်များ၏ပုဒ်မ 2. ဖောက်သည်ရဲ့လက်ခံမှုအတွက်ရည်ညွှန်းညာဖက်ကငျြ့သုံးသညျ့အခြိနျမှတန်းတူညီမျှတဲ့ကာလအတွက်ပို့ဆောင်မှု၏နေ့စွဲတိုးချဲ့စေခြင်းငှါဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ် မဆိုထိုကဲ့သို့နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အင်အားစု Majeure ပွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အားလုံးတောင်းဆိုမှုများတစ်ဦးစွန့်လွှတ်။ ပုဒ်မ2မှာရည်ညွှန်းလက်ျာမဆိုတွေအများကြီးသို့မဟုတ်အရစ်ကျသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်နှောင့်နှေးကျန်ရှိသောပေးပို့လကျခံဖို့ဖောက်သည်ရဲ့တာဝန်များ၏ဖောက်သည်သက်သာရာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယူအက်စ်အေအတွင်းနေရာများမှတင်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများသံမဏိထိန်သိမ်းသို့မဟုတ် FSGs ၏ bungie ထိန်သိမ်းအပေါ်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါသည်။ အားလုံးထိုကဲ့သို့သောထိန်သိမ်းဖြစ်ကြပြီး FSGs များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေပါဦးမည်။ ဖောက်သည်ချ, တင်နှင့်ထိန်သိမ်းသုံးပြီးအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စောင့်ရှောက်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထိန်သိမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာနှင့် ဆက်စပ်. ဖောက်သည်ကအသုံးပြုခံရဖို့နှင့် FSG ထုတ်ကုန်များပို့ဆောင်မှုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, စာရင်းသိုလှောင်မှုနှင့်အခြားသိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့သို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှ '' ထုတ်ကုန်များတင်ပို့အပါအဝင်အဘယ်သူမျှမကအခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်ရကြမည်။ ဖောက်သည်မဆိုဤကဲ့သို့သောထိန်သိမ်း, ပြောင်းလဲရောင်းချသို့မဟုတ် encumbrance မှဘာသာရပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ထိန်သိမ်းဖို့မဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် FSG မှဖောက်သည်ပေးထိန်သိမ်းမရရှိနိုင်စေရန်တာဝန်ရှိသည်။ FSG ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီး, FSG အားဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်ရရှိနိုင်မဆိုထိန်သိမ်း၏အစားထိုးတန်ဖိုးဖောက်သည်ကိုအားသွင်းခွင့်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦး FSG ၏တောင်းဆိုမှုအပေါ်မှာ၎င်း, ဖောက်သည်ဖောက်သည်ရဲ့အပိုင်ထဲမှာထိန်သိမ်း၏နံပါတ်နှင့်အခွအေနေဆုံးဖြတ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကို enable ရန်နှင့် FSGs ၏အကျိုးအတွက်များအတွက်ထိန်သိမ်း၏အပိုင် recover လုပ်ဖို့ကပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းသုံးစွဲသူရဲ့အဆောက်အဦဖို့ FSG လက်လှမ်းနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်များခွင့်ပါလိမ့်မယ် ။ ထိန်သိမ်း၏အပိုင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူတစ် FSG ခြင်းဖြင့်ဆည်းကပ်လျှင်ဖောက်သည်က၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအားလုံးအရိုအသေအတွက် FSGs နှင့်၎င်းတို့၏ဖြင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။
16. အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ။ ဒါဟာသဘောတူညီချက်နှင့်မဆိုအမိန့်ဖြင့်အုပ်ချုပ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအတိုင်းဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရလိမ့်မည်။
17. တစ်ခုလုံးသဘောတူညီချက်။ FSG ရဲ့စျေးနှုန်း, Sale, FSG ရဲ့အမိန့်အတည်ပြုချက်, Pro ကို forma, FSG ရဲ့လီမိတက်အာမခံ (သက်ဆိုင်သောနှင့် FSG ကထုတ်ပေးအဖြစ်လျှင်) နှင့်မဆိုဖြည့်စွက်စာရွက်စာတမ်းများ၏ဤသတ်မှတ်ချက်များ FSG အားဖြင့် hereto အတွင်းသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်, ထိုရန်အဖြစ်ပါတီများအကြားပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ပါဝင်သည် ဘာသာရပ် hereof ကိစ္စနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရပ်ကိစ္စမှလေးစားမှုနှင့်အတူပါးစပ်သို့မဟုတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖြစ်စေ, မည်သည့်ကြိုတင်သို့မဟုတ်ခေတ်တစ်ခေတ်ဆက်သွယ်ရေး, ကိုယ်စားပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်သဘောတူညီချက်များအစားထိုးခြင်းနှင့်အစားထိုး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုပိုမိုသိကျေးဇူးပြုပြီး input ကိုအောကျတှငျအလွတ်ထဲမှာသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ "Submit" button ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်: